धार्मिक कार्य सुरु गर्नुपुर्व किन बजाईन्छ शंख? यस्तो छ कारण – Everest Dainik – News from Nepal
धार्मिक कार्य सुरु गर्नुपुर्व किन बजाईन्छ शंख? यस्तो छ कारण
काठमाडौंः कुनै पनि शुभ कार्यहरू जस्तै पूजा पाठ, उत्सव, हवन, विजय महोत्सव, विवाह, राज्याभिषेक आदिमा शंख बजाउनुलाई शुभ र अनिवार्य मानिन्छ। शंख बजाउनाले विजय, समृद्धि, प्रसिद्धि पाइने मान्यता रहेको छ। मन्दिरमा बिहान र बेलुका आरतीमा शंख बजाउने परम्परा रहेको छ। शंखनाद बिना कुनै पनि पूजालाई अपूर्ण मानिन्छ।
अथर्ववेदको चौंथो अध्यायको दशौँ स्कन्दमा यो भनिएको छ कि, शंख अन्तरिक्ष वायु, ज्योतिर्मंडल र सुवर्णलेयुक्त छ। तर कुनै धार्मिक कार्य सुरु गर्नुपुर्व शंख किन बजाईन्छ रु आउनुहोस जानिराखौं
धार्मिकशास्त्रमा उल्लेख भए अनुसार शंखको आवाजले दुश्मनलाई कमजोर बनाउँछ। पुराणमा श्री विष्णुको शंख, अर्जुनको पञ्चजन्य, देवदत्त आदिको उल्लेख छ। पुराणका अनुसार पूजाको समयमा जसले शंख बजाउछ उसको सम्पूर्ण पाप नाश हुन्छ र सदा भगवान विष्णुको आशिष् पाउँछ। साथै, सूर्योदय हुनु अघि र सूर्यास्त पछाडि शंख बजाउनाले सुर्यको किरणले ध्वनिको तरंगमा वृद्धि गर्ने विशस गरिन्छ।
शंखको ध्वनिले शरीर र दिमागमा प्रभाव पार्छ र साथै यसमा प्रदुषण हटाउने पनि अद्भुत क्षमता हुन्छ। शंख बजाउनाले घरमा नकारात्मक उर्जा समेत नष्ट हुने जनविश्वास रहेको छ। शंखमा भरिएको जलमा किटनाशक शक्ति हुने भएकाले पूजा अनुष्ठानपछि शरीरमा छर्कनुलाई पनि शुभ मानिन्छ।
यसका साथै शंखमा भरिएको जल पिउनु स्वास्थ्यका हिसाबले पनि निकै नै लाभदायी रहेको छ।